Rakotomanga Eric: “Mampisavorovoro ny fampielezan-kevitra mialoha” | NewsMada
“Tena tsy mety ny hoe fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana amin’izao, lasa miteraka savorovoro eo amin’ny raharaha tokony hilamina. Tsy maintsy jerena kosa aloha izay tena nahatonga an’izay: ny tsy fanazavan’ny didy aman-dalàna, nohazavain’ny Ceni andaniny; ankilany, ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanoranana (HCC).”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny AKFM, Rakotomanga Eric, momba ny fisian’ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana amin’izao fifidianana depiote izao. Nilaza, ohatra, ny andaniny fa izao ny hoe fotoana mialoha ny tena fampielezan-kevitra; ny ankilany indray, nanambara ny mifanohitra amin’izay.
Iaraha-manaiky rahateo fa tsy misy ny lalàna mifehy an’izay fotoana mialoha ny tena fampielezan-kevitra izay hatramin’izao. Vokany, manararaotra ny rehetra. Ao ny mody tsy mahalala ilay lalàna ka manao fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana. Ao ny tena tsy mahalala izany, mba manao koa fa matahotra ny ho tratra aoriana.
Lasa gaboraraka ny firosoana mankany amin’ny fifidianana
“Ny dikan’izany rehetra izany, lasa gaboraraka ny firosoana mankany amin’ny fifidianana. Mbola hiteraka loninlony indray izany”, hoy izy. Nefa raha izany no mbola avela amin’izao na tohizana, tsy hita izay fandrosoana atao. Izao faramparany izao vao hoe mifandrindra ny HCC sy ny Ceni hampitovy ny fomba fijeriny.
“Koa raha lalàna iray izao ka rafi-panjakana roa samy hafa no mifanipaka ny zavatra lazainy: tena tsy izy kosa izany”, hoy ihany izy. Raha ny tokony ho izy, atsahatra aloha izao fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana izao mandra-pahatonga ny fandaminana vaovao apetraky ny HCC sy ny Ceni ny amin’izay azo atao sy ny tsy azo atao.
Mila jerena ny fandaminana ny fiainam-bahoaka
Na izany aza, tokony hojeren’ny haino aman-jery tsy miankina tsy hoe hiantehitra fotsiny amin’ny vola na ny toy izany. Mba tokony hojerena aloha ny fandaminana ny fiainam-bahoaka. Aleo mandeha amin’ny lalàna ifanarahana sy teny ierana ny anaovana azy.
Rehefa misy lesoka ny lalàna: tsy hararaotina izay fahabangana izay, hiteraka savorovoro eo amin’ny mpifidy. Marina fa tsy tonga lafatra ny lalàna fa rehefa izay aloha no eo: arahina araka ny tokony ho izy mandra-panoloana azy.